Indlela ukupheka inkukhu hhayi ukuze lonakaliswe?
Indlela ukupheka inkukhu hhayi ukuze lonakaliswe? Imane, kukhona umthetho owodwa kuphela - isikhathi. Ukupheka inkukhu kufanele kube imizuzu akukho kuka eziyishumi, uma kuyintando ucezu amafutha. Futhi uma unomzimba omncane, ngomzuzu ngisho ngalapha nangalapha ngokwanele ukwenza inyama kwaba waphezulu. Kuwufanele kancane overdo it epanini noma umhluzi, futhi voila - une "yedwa" abilisiwe noma okuthosiwe. Lamagama uyihaba kakhulu, kodwa olunembile. Ungesabi, ngisho uma kancane ehlaza ngqo, it "iza" ngaphansi kwethonya ukushisa asalile. Lapho ngakho ngoba inyama phambi ukusetshenziswa usadinga ulale imizuzu emihlanu.
Sikunikeza ezinye izindlela okumnandi, indlela ukupheka umucu inkukhu webele. Ngoba noma yisiphi iresiphi, uphakamise yithi, isifuba kumele ihlukaniswe izingxenye alinganayo futhi kancane beat off. Ungafaki usawoti! Kungcono ukukwenza ngokushesha ngaphambi ukupheka ngakho inyama uhlala namanzi.
Abelana nezibopho zibe izingxenye chops nzima kuphela ekuqaleni. Qonda ukuthi nalapho ukwenza imbobo, ukuthi konke kwaba ukushuba ofanayo, kunzima, kodwa ibaluleke kakhulu. imizamo eminingana - futhi ngeke abe okhokhelwayo. Ngokuvamile, umuntu webele kukhona ezine "otbivnushki". Lena inqubo ebalulekile kakhulu futhi isikhathi esiningi. Khona-ke yonke into ilula.
chops Ready ezidingekayo nokususa anyanisi zifakwe emanzini anosawoti ngesikhathi imizuzu eyishumi nanhlanu kuya ngosuku, kodwa engasekho. Lungiselela it kanje: oqoshiwe, usawoti, bese crumple kuze kube u-anyanisi kuthiwa uyayekela eziningi juice. Zama ukukwenza ngokucophelela. Ukuze lokhu shukela kuze kufike esihlokweni selinye blade (by caramelization ezicucwini kwakhiwa enhle umbala uqweqwe), pepper izinongo noma lezo othanda, isibonelo turmeric noma usoso wesoya.
Indlela ukupheka inkukhu. Recipe № 1
Beka ukulungele, ngamafutha yemifino, onion tincetu ngaphandle evuthayo uyithose pan hlupha upheke ohlangothini ezingadluli ngeminithi. cutlets Ready ezibekwe esitsheni ngesivalo, ethela fresh cut anyanisi kanye coriander. Akusukume.
Indlela ukupheka inkukhu. Recipe № 2
Roll ucezu ngalunye ngaphandle ufulawa onion ke e Iqanda washaywa nge usawoti, futhi esikhathini ufulawa. Fry emafutheni kushisa kakhulu kuze brown golden.
Indlela ukupheka inkukhu. Recipe № 3
On eligcotshisiwekuhovini baking sheet babeka izingcezu, zithulula isipuni esigcwele amakhowe ethosiwe kanye anyanisi, imayonnaise. Top trotted yashizi ushizi kanzima. Bhaka imizuzu engaba yishumi kuhovini kahle osuke usushisa kakade ukuba degrees 200. Ushizi Bhaka kuze brown golden ngeke isikhathi, kodwa izintelezi yayo kungukuthi elahlekile.
Ngasekuqaleni sinitshelile kanjani ngokushesha ukulungiselela inkukhu, futhi manje indlela yokukwenza okumnandi, okumnandi.
On isiqephu batted kanye enososo inkukhu walala nocezu ubhekeni futhi bopha kule Ngohlelo brusochek ukhilimu ushizi nge garlic. Yakhe, ngasendleleni, ungayithola enye dill, cilantro noma basil, emnyama - ngamafuphi, konke okuthandayo. Lolonga imvilophi gazinga epanini kahle evuthayo kuze brown golden, kusukela ohlangothini lapho umphetho. Ngokuqinisekile, onqenqemeni Ungabeka kanye nothi lokuvungula imbala.
Literacy umkhankaso: indlela Fry chanterelles?
Indlela ukupheka shpikachki ekhaya?
Donka nge kubhavu, uzilungiselele ngezandla zabo, - impumelelo ukudoba
Le ndawo yaseGrisi. Inhloko-dolobha yaseGreece. ulwazi olujwayelekile mayelana lizwe
Semi-trailer: izitembu, izithombe, amanani. Yini okufanele ukuthenga ugandaganda?
Umdlali uJason Patrick: biography, isithombe. Amabhayisikobho amahle kakhulu nemibukiso ye-TV
Amanzi epaki "Dolphin" e Nebug: izikhangibavakashi, amanani, ukubuyekezwa
Yini ehlukanisa eqanjiwe kusukela fantasy? Umahluko omkhulu
Dragees, "Maerz Nobuhle" - izibuyekezo mayelana amavithamini ubuhle impilo
Chebureks iresiphi zakudala nge inyama.